Nweta asambodo gụsịrị akwụkwọ taa »Mahadum Hodges - nnabata
Categories: Asambodo gụsịrị akwụkwọ, Nanị Eziokwu
Họrọ Mmemme Asambodo gụsịrị akwụkwọ
Lọ akwụkwọ kachasị mma: Lọ akwụkwọ kacha mma na Florida
Ntuzi bara uru nke kọleji: 2020 Top kọleji dị na Florida
Na-eduzi Schoolslọ Akwụkwọ N'ịntanetị: 2020 kacha mma na kọleji dị na Florida
Choputa Mmemme Degree anyị
Akwụkwọ nke gụsịrị akwụkwọ na Cybersecurity
Asambodo Cybersecurity bụ asambodo oge 18 kredit nwere ike mechaa na ọkara abụọ. Ọ na - agwakọta usoro ihe ọmụma sara mbara dị ka Nhazi usoro nke usoro IT na ITdị IT na isiokwu cybersecurity gbadoro anya dị ka Nkwado nchedo, Nkwado Nchedo IT, na Advanced Forensics. A haziri asambodo a maka ndị chọrọ ịkachasị iche na cybersecurity dị elu maka ọrụ ha. Tụkwasị na nke a, akwụkwọ a nwere ike ịkwadebe ndị chọrọ ịkụzi cybersecurity na kọleji. Enwere ikike maka usoro ihe omume a, gụnyere asambodo bachelor.
Akwụkwọ nchịkwa njikwa data
Asambodo Management database na-agwakọta usoro ihe ọmụma sara mbara isiokwu dị ka Managementkpụrụ Nchịkwa IT na Usoro Nhazi na-elekwasị anya na nchekwa data nchekwa isiokwu dị ka Wlọ nkwakọba data na Mkpebi Nkwado Mgbakọ na nchekwa data yana nchekwa na nyocha. Ihe omume a ga - enyere gi aka inwe oganihu n’ime oru gi ugbu a ma obu kwadebe gi nke oma maka mgbanwe oru gi wee ghachaa n’ime semesters abuo. Enwere ikike maka usoro ihe omume a, gụnyere asambodo bachelor.
Di iche iche, Nha nha anya na Nsonye Onye ndu
Di iche iche, Nha nha anya na Nsonye
Di iche iche di iche iche, ndi nha anya na ndi ozo nke ndi gụsịrị akwukwo bu ndi choro imuta otu esi agbanwe gburugburu oru site na ikwalite iche iche na ime ka ha di. Ezubere usoro ihe a maka njikwa na ndị isi ọrụ ma enwere ike iwere ya naanị ma ọ bụ kwekọọ na ogo mmụta. Enwere ikike maka usoro ihe omume a, gụnyere asambodo bachelor.